एक छाकमा नौ हजार सात सय लिटर दूध दिने यो हो संसारको महंगो गाई, जसको मूल्य सुन्दा दुनियाँ चकित ! – live 60media
एक छाकमा नौ हजार सात सय लिटर दूध दिने यो हो संसारको महंगो गाई, जसको मूल्य सुन्दा दुनियाँ चकित !
एजेन्सी। उत्तर अमेरिकामा पाइने ईस्टसाइड लेभिसडेल गोल्ड मिस्सी नामक गाई संसारकै सबभन्दा महंगो गाई हो।
होल्स्टीन प्रजातिको यो गाईले एउटा निश्चित समयावधिमा करीब नौ हजार सात सय लिटर दूध दिन्छ।
यही प्रजातिको गाईका कारण अमेरिका र क्यानाडामा दुग्ध क्रान्ति आएको थियो। गाईको लिलाम गरिँदा धेरै व्यापारीहरूले ठूलो बोली लगाए।
गाईलाई एक व्यापारीले करीब ३६ करोड रुपैयाँमा किनेका थिए।यो पनि पढ्नुस
← यो जोडिले बिहेपछि होटलमा हनिमून मनाउँदा पाँच वटा खाट भाँ च्यो
TikTok बनाउदा झुलुङ्गे पुलबाट तल खसेको लाइभ भिडियो ,Dang Purandhara Jharana →